Tafika Masina tany Ankadivory Imerintsiatosika – FJKM Ambavahadimitafo Tafika Masina tany Ankadivory Imerintsiatosika |
Tafika Masina tany Ankadivory Imerintsiatosika
Maneno ny « sifflet », mampatsiahy fa amin’ny 6 ora sy 45 mn no misakafo, amin’ny 7 ora sy 15 mn ny fanompoam-pivavahana ary amin’ny 7 ora sy 30 mn no miainga hanafika.
Ho any Antanetilava dia mitohy ho any Morarano ary mifarana any Ankadivory no dianay, izay lavidavitra ihany avy eo amin’ny « Mpamafy » (« Mpamafy » no anaran’ny toerana itobianay). Ary tsy vitan’ny hoe lavitra Antanetilava fa miaka-piakarana mideza ihany no mankany.
Ny « paysage » tazanao rehefa ho any Antanetilava dia tendrombohitra manodidina. Mangina tokoa ny làlana mankany ary ny feonay miresaka ihany no manakotaba izany fahanginana mahafinaritra izany. Ary misy rivotra mitsoka malefaka dia malefaka izay tena mahafinaritra mihitsy ho anay izay tsemboka no vizana. Izahay izay miakatra ilay tendrombohitra mideza.
Rehefa tonga eny an-tampony ianao, dia indro tazanao, mbola ery lavitra ery, ny tanànan’Antanetilava. Ary raha mitodika mijery ny làlana efa vita, sady miala sasatra kely ihany, dia tazanao manangasanga ery lavitra ery ny tanànan’Antananarivo. Mankadiry tokoa ny taza-maso. Tsara dia tsara ny tazana ka lasa adinonao hatramin’ny havizananao, ary ny hany tonga ao an-tsainao manoloana ny hitanao dia ny hoe : Lehibe ny Andriamanitsika, Tsitoha Izy.
Rehefa tonga tao Ankadivoiy izahay dia mihevitra ny hoe efa akaiky ny « Mpamafy » na dia mbola misy làlana adiny iray latsaka aza. Tamin’ny 15 ora sy 30 mn eo ho eo izahay no tafaverina tao amin’ny « Mpamafy », izay vao hisakafo antoandro. Ary mandritra izany làlana izany dia fihomehezana, hafaliana foana ny anay. Hafaliana tokoa ny fandehanana mitory an’i Jesoa Kristy.
Vizana tokoa izahay rehefa tafaverina ao amin’ny « Mpamafy », fa izao : havizanana mahafinaritra, havizanana feno hafaliana. Havizanana tsy hay no mitantara azy, fa havizanana iainanana vao takatry ny saina. Hafaliana koa ny anay na eny an-dàlana, na ao an-trano. Hafaliana tsy hay no mitantara azy, fa hafaliana iainana koa vao takatry ny saina.
Ireto misy fihetsik’olona tao aminay, ahafahana manarangaranga fotsiny ny haben’izany hafalianay izany. Raha mifampitantara ny zavatra mampihomehy teny am-pitoriana izahay dia ao ny latsa-dranomaso noho ny fihomehezana, ao ny mifona mba tsy hampihomehezina intsony, ao ny mitaraina fa vizaky ny fihomehezana. Tsy ny hoe ny fihomehezana fotsiny ihany no afahana mandrefy ny fifalianay tany, fa ao ny fifandraisanay, ny fîarahana manao raharaha, fiainam-pifaliana izay tsy hay tantaraina, no niainanay tany.
Niainanay tany koa ny hoe : « Momba ny olona irahiny hitory Azy ny Tompo« . Raha fintinina dia toy izao ny fandehan’ny Tafika Masina tany :
– Nahomby satria tafaray amin’ny Tompo tokoa izahay ary nahafinaritra satria fiainam-pifaliana no niainanay tany.
– Farany : Ny Tafika Masina, dia tsy hay tantaraina fa andrana fotsiny izao ataoko izao ; fa mila iainana, ary mampitombo ny mpitory ny fanaovana izany.
Ho an’Andriamankra irery ny voninahitra.